Umbono wolwandle, indawo yokuhlala yaseChania Kalathas
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlexis
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uAlexis iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Amagumbi ethu abekwe kwilali yaseKalathas, ukuhamba nge-10min ukusuka elunxwemeni i-7km ukuya kwisikhululo seenqwelomoya kuphela i-9km kude nesixeko sase-CHANIA. Indlu ikhululekile, ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye uyakonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo kolwandle kwibalcony yethu
Le ndlu inegumbi elikhulu elineebhedi ezimbini. Ikhitshi elinazo zonke izixhobo eziyimfuneko, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa, umoya womoya kunye neebhalkhoni ezi-2 ezinombono wolwandle. Sikubonelela ngelinen entsha kunye neetawuli zeshawa kodwa hayi iitawuli zaselwandle. Kufuneka uze neyakho. :)Kukho iTV, kunye noqhagamshelo lwe-intanethi ye-wi-fi
4.58 · Izimvo eziyi-155
Ulwandle oluhle lwelali yaseKalathas yi-5 min AWAY ukusuka kwindlu. Lulwandle olunesanti enamanzi angekho nzulu athi ngexesha lasehlotyeni axakeke nolutsha lwase-CHANIA ngenxa yokuba kufutshane nedolophu.
Le ndlu ilungiselelwe ukufikelela ngokulula kufutshane nesiXeko esihle saseChania ekumgama oziikhilomitha ezili-9 kunye nenani lezikhumbuzo kunye nokuncwina umhambi anokuba nomdla wokundwendwela. Ezo zikhumbuzo yiGouverneto Monastery kunye neMonastery yaseAgia Triada. Idolophana eyaziwayo yaseStavros (ukusuka kwifilimu ethi "Zorbas" kunye no-Antony Quinn) yimizuzu emihlanu ukuya enyakatho yeKalathas.
Ngapha koko, kufutshane namagumbi ethu lunxweme oludumileyo lwe "Seitan Limania" olunamanzi amangalisayo, angaqhelekanga, aluhlaza.
Siza kukulinda ekufikeni kwakho ukuze sikunike izitshixo kwaye sikucacisele yonke into malunga nefulethi. Ngeentsuku zokuhlala kwakho unokuqhagamshelana nathi ngokulula kwaye sityelela isakhiwo rhoqo ukuze sinakekele umyezo kunye neendawo eziqhelekileyo.
Siza kukulinda ekufikeni kwakho ukuze sikunike izitshixo kwaye sikucacisele yonke into malunga nefulethi. Ngeentsuku zokuhlala kwakho unokuqhagamshelana nathi ngokulula kwaye sitye…
Inombolo yomthetho: 00000400971